Kitra – Mifandray toy ny mpirahalahy ny Barea - ewa.mg
News - Kitra – Mifandray toy ny mpirahalahy ny Barea
Miditra amin’ny herinandro faharoa
amin’ny fampivondronana ny Barea de Madagascar, nanomboka ny
alatsinainy lasa teo. Nanambara ny niainany ny tapany voalohany i
Bapasy sy i Tsiry ary i Melvin. Nambaran’izy telo mirahalahy fa
mifampitondra toy ny mpirahalahy ny mpilalaon’ny Barea de
Madagascar ao anatin’izao fanomanantena izao. Ho an’i Bapasy, matoa
nantsoina dia vonona ary hiadiana ny toerana. “Nahazo tombony
tamin’ny fiarahana tamin’ny mpanazatra vaovao satria nisy zavatra
tsy mbola hita ary nahazo traikefa hoentina any amin’ny klioba
hilalaovany. Manoro ireo mpilalao efa manana traikefa toa an’i
Morel”, hoy izy. Aminy, ny fiarahana tamin’i Caloin,
ny asabotsy lasa teo, nambarany fa ilaina ny fiarahana amin’ny
mpilalao rehetra izay mila mahay ny toerana rehetra. Nahafaly ireo
mpilalao zokiny ny namalian’ireo mpilalao zandriny, izay
ampirisihiny fa mendrika ny hanana ny toerany ao amin’ny
ekipam-pirenena fa tsy ho variana amin’ny anarana efa
Tsy nanafina kosa i Tsiry fa
nahitany zava-baovao ny niatrehany ny fampivondronana tao amin’ny
Barea. “Ilay fiarahana na “tandem”, izany no hitako tsy ampy
raha iny lalao tamin’ny asabotsy iny”, hoy i Tsiry.
Raha ho an’i Melvin Adrien,
mpiandry tsatoby indray, nilaza ny tovolahy fa miray saina tsara
izy sy i Nina ary i Mathias ary samy manana andraikitra hiaro ny
voninahi-pirenena. “Fitsapana ny tamin’ny asabotsy ka miezaka
maneho ny fahaiza-manaony ny tsirairay. Toy ny fianakaviana ny
Barea ka mifanoro sy mifampizara traikefa”, hoy izy.
L’article Kitra – Mifandray toy ny mpirahalahy ny Barea a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 15/06/2021
Projets routiers : Phase de bitumage sur la RN4 à Maevatanàna
Route de Maevatanàna, en cours de bitumage. Les travaux de réfection d’infrastructures routières se poursuivent dans les différentes régions à travers la Grande île. Dans la région Betsiboka, l’entreprise chargée des travaux procède déjà au bitumage des routes de Maevatanàna. Suivant les directives du MATP (ministère de l’Aménagement du territoire et des travaux publics), les contrôles de la qualité des travaux sont stricts, selon la direction régionale de l’Aménagement du territoire et des travaux publics (DRATP) de Betsiboka. En effet, ces contrôles sont menés au niveau de tous les chantiers en cours. Tel est également le cas des travaux de réhabilitation sur l’axe Manandriana – Ambositra. La DRATP de la région Amoron’i Mania a effectué une descente, hier, pour constater de visu les avancées et la qualité des travaux sur les 18Km de route en cours de réhabilitation. D’après les informations, les 45% des travaux prévus se dérouler sur trois mois sont déjà achevés. Antsa R. L’article Projets routiers : Phase de bitumage sur la RN4 à Maevatanàna est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article Projets routiers : Phase de bitumage sur la RN4 à Maevatanàna a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Kitra – «Europa ligue»: hifandona i Abel Anicet sy i Gareth Bale
Hiditra amin’ny andro fahatelo ny fifanintsanana isam-bondrona eo amin’ny fiadiana ny “Europ ligue”, taranja baolina kitra. Anisan’ireo mandray anjara amin’izany i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar. Hifanandrina amin’ny Tottenham Hotspur, ilalaovan’ilay Galoà, i Gareth Bale, mantsy ny Ludogoretz, misy ity Malagasy ity, ho an’ny sokajy J.Fihaonana mandroso, hotanterahina rahampitso alakamisy 5 novambra. Amin’ity, hampiantrano an-dry zareo Anglisy ny Bolgara. Ekipa tsy mbola mihaona matetika ny roa tonta. Na izany aza, heverin’ny rehetra fa ho toy ny famaranana kely ity lalaon’ny roa tonta ity.Raha ny filaharana ao amin’ity vondrona J ity, mitana ny rambony ny Ludogoretz, efa resy indroa, izany hoe, tsy mbola manana isa. Faharoa kosa ny Tottenham, nandresy indray mandeha ary resy indray mandeha, manana isa 3. Mitarika vonjimaika ny Antwerp, manana isa 6 rehefa nandresy indroa. Eo amin’ny laharana fahatelo ny LASK, manana isa telo raha nandresy indray mandeha sy resy indray mandeha ihany koa.TompondakaL’article Kitra – «Europa ligue»: hifandona i Abel Anicet sy i Gareth Bale a été récupéré chez Newsmada.
Teknisianina roa frantsay: hampiakarina ny lentan’ ny vatosoa malagasy
Tonga eto Madagasikara ny vahiny frantsay roa, ny Dr Patrick Voillot sy i Maxime Voilot, samy manampahaizana amin’ny lafiny vatosoa sarobidy. Manana fandaharana be mpanaraka amin’ny France 3 sy ny France 5 i Patrick Voillot, mitondra ny lo­hateny hoe “A la poursuite des pierres précieuses”, hitan’ ny olona maherin’ny 23 tapitrisa. Nambarany fa “tonga eto izahay hampiakatra ny lenta sy hampisongadina ny hatsaran’ny vatosoa eto Madagasikara”. Mifindra any amin’ny ka­on­­tinanta hafa ny vatosoa avy aty Madagasikara. Tsara lavitra ny vatosoa safira ma­lagasy miohatra ny any Sri-Lanka ka mila apetraka ny marika mampiavaka azy mba ho lafo kokoa eo amin’ny tsena iraisam-pirenena.Nidina tany Andilana Avaratra Vao tsy ela akory izay, hita ny vatosoa béryl tsara kalitao anyAndilana Avaratra, Ampa­ra­faravola. Nidina tany an-toerana izy roa lahy ireto na­nao fanadihadiana hamokatra horonantsary. Efa nahita ny emeraoda any Andonabe Ma­nanjary koa izy ireo, sy ny safira any Ilakaka. Nanao fa­me­labelarana teny amin’ny Mining Business Center Ivato izy roa lahy, omaly, nitondra ny lohahevitra hoe “Voyage au coeur des pierres précieuses de Madagascar”.Njaka A.L’article Teknisianina roa frantsay: hampiakarina ny lentan’ ny vatosoa malagasy a été récupéré chez Newsmada.
“Africa women’s cup 2019”: anisan’ireo firenena efatra hiady ho tompondaka i Madagasikara
Sambany ary voalohany eo amin’ny tantaran’ny rugby lalaovina olona 15 eto Afrika no hisy fifaninanana hiadiana ny ho tompondakan’ny kaontinanta, sokajy vehivavy. Firenena efatra ny hiady ny ho lohany amin’izany. Araka ny tapaky ny fivoriamben’ny Rugby Afrique, farany teo, hisy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ny sokajy “senior” vehivavy na ny “Africa women’s cup 2019”, lalaovin’olona 15. Sambany ary voalohany hisy ity fifaninanana ity. Hampiantrano ity andiany voalohany ity i Afrika Atsimo.Araka ny tetiandro, hotanterahina atsy Afrika Atsimo, ny 9 ka hatramin’ny 17 aogositra ho avy izao, ity fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, sokajy vehivavy, ity. Amin’izao andiany voalohany izao, firenena efatra ihany ny hiady lohany: i Afrika Atsimo, mpampiantrano, i Kenya, i Madagasikara ary i Ogandà.Tsy mbola fantatra aloha ny “formule” hanaovana ny fifaninanana na hifandona avokoa ny rehetra ka miatrika ny famaranana ny roa voalohany be isa indrindra na ho lalao manasa-dalana avy hatrany ny hatao.Hanan-danja ity “Africa women’s cup 2019” ity satria hiadiana toerana hiatrehana ny ho tompondaka eran-tany, hatao any Nouvelle-Zélande, ny taona 2021. Tsy mbola hay ihany koa na ny ho tompondakan’i Afrika ihany no hisolo tena an’i Afrika amin’izany fiadiana ny ho tompondaka eran-tany izany na ny roa voalohany.Hatreto, efa vonona hiatrika izany ny Makis de Madagascar, efa niatrika ny fampivondronana, efa ho herintaona latsaka izay.Tsy mbola niatrika lalao ho an’olona 15 izany ny Makis vehivavy, raha teo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, saingy mino ny teknisianina fa tsy hanavao loatra azy ireo ny ho fiatrehana izany satria mpilalao efa miatrika fifaninanana amin’ny rugby à XV ny ankamaroan’izy ireo. Raha ny tombana, i Afrika Atsimo no tena atahorana. I Kenya sy i Ogandà, mety hitovitovy amin’ny Makis de Madagascar satria ny rugby à VII ny tena mahazatra azy ireo. TompondakaL’article “Africa women’s cup 2019”: anisan’ireo firenena efatra hiady ho tompondaka i Madagasikara a été récupéré chez Newsmada.
Lehilahy iray 38 taona maty tsy tra-drano, ny alin’ny alarobia tetsy Ambilanibe Andavamamba. Fantatra fa nidona tamin’ny takelabiana dokambarotra izy niaraka amin’ny moto ka nianjera. Vokany, voadona mafy ny lohany ka naratra ary nitarika amin’ny fahafatesany izany.L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Fanafihana :: Rangahy nanohitra jiolahy tao an-tranony
Tsy nanaiky mora satria nanohitra hatramin’ny farany an’ireo jiolahy enina nanafika tao an-tranony ny lehilahy iray, manodidina ny 70 taona, tany Marovato Andapa, ny alin’ny sabotsy lasa teo. Naratra vokatr’izany izy. Nirifatra nandositra rehefa nirohotan’ny fokonolona ireo olon-dratsy. Tsy voaroba ny fitoeram-bola nokendren’iretsy farany. Mpandraharaha ara-barotra itsy lasibatry ny fanafihana itsy. Nandà sady tsy nilaza tamin’ireo jiolahy hatramin’ny farany ny toerana misy ny fanalahidin’ny vata fitoeram-bolany izy. Namaky an-keriny an’ilay vata ireo mpanafika. Nanaitra ny mpiara-monina ny tabataba naterak’izany sy ny fifandonana tao an-trano. Nifarimbona ny olona teo amin’ny manodidina nitondra famonjena an’ity trano voatafika ity. Nisy ny tora-bato variraraka natao tamin’ny tafon-trano hanairana an’ireo andian-jiolahy tao anatiny. Nirifatra nandositra ihany ireo mpanafika avy eo, saingy lasan’izy ireo ny basin’ny tompon-trano. Novonjena haingana teny amin’ny hopitaly, taorian’izay, ilay zokiolona naratra. L’article Fanafihana :: Rangahy nanohitra jiolahy tao an-tranony est apparu en premier sur AoRaha.
Ceni – Nisehoana olana ny fifidianana loholona: hofaritan’ny HCC ny isan’ny seza ho an’ny Irmar sy ny MMM
Anjaran’ny eny Ambohidahy indray izao. Namoaka ny voka-pifidianana vonjimaika ny teo anivon’ny Ceni, omaly. Anisan’ny nisongadina tamin’izany ny nisehoan’ny olana sasany tamin’ny fifidianana loholona, ny 11 desambra teo.Eo hatrany ny olana miverimberina. Ohatra amin’izany ny tany amin’ny faritanin’i Toliara, tao amin’ny distrikan’i Miandrivazo, nisehoan’ny fifandisoan’ny isam-bato, tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy. Na izany aza, tsy nisy fiovana firy amin’ny fironana tamin’ny vokatra efa navoakan’ny Ceni izao voka-pifidianana vonjimaika izao.Nibata ny fandresena amin’ny ankapobeny ny Irmar. Nandresy hatrany izy ireo amin’ny renivohi-paritany enina. Tsy mifanalavitra amin’izany koa anefa ny antoko Malagasy miara-miainga, tamin’ny faritany nandrotsahan’izy ireo kandidà : Antananarivo sy tany Toamasina. Tsy azo hamaivanina kosa anefa ireo mahaleo tena tany amin’ny faritany sasany na resy aza. Tokony hakana lesona avokoa izany.Loholona 18 ho etsy AnosikelyAraka izany, hamoaka ny voka-pifidianana ofisialy sy hamaritra, miainga avy amin’ny kajy amin’ny antsasa-manilan’ny vato azon’ny kandidà avy ny HCC. Tombanana ho amin’ny volana janoary io ny famoahana izany. Hofaritan’izy ireo amin’izany ny seza ho azon’ny Irmar sy ny MMM, anisan’ny nahazo vato be indrindra ka haka ny toerana etsy Anosikely. Hatreto aloha, manana loholona 10 ny Irmar. Roa kosa ny Malagasy miara-miainga, raha io voka-pifidianana vonjimaika io.Nidera tena ho nahavita azy ny CeniMiisa 12 ny seza ho an’ireo loholona nofidina raha tendren’ny filoham-pirenena kosa ny enina ka mahafeno azy ireo ho 18.Tsiahivina fa nidera tena ho nahavita dingana iray lehibe indray ny Ceni, tamin’ny alalan’ny filohany, Rakotomanana Hery, raha nandaha-teny, tamin’ny fahavitan’iny fifidianana loholona iny.Synèse R. Antananarivo : 63,19% ny Irmar raha 36,54% kosa ny MMM. 0, 27% ny mahaleo tena Faly.Antsiranana : 72,75% ny Irmar. Mahaleo tena Bematana 25,94%, ary ny tsy miankina Lemoine Soloniaina Hermann nibata ny 1, 31% . Fianarantsoa : 91,23% ny Irmar ary ny Fanorolahy – IAD nahazo 8,77%. Mahajanga : Lisitra kandidà tokana Irmar, nahazo 100%.Toamasina : 52,72% ny Irmar raha nahazo 46,42% ny MMM. Ny Mbahiray 0,86%.Toliara : 75,14% ny Irmar raha 24,86% ny Vahoaka miara-mandroso (VMM).92% ny tahan’ny fandraisana anjara ka tany Mahajanga ny taha ambany indrindra satria 84,15%. L’article Ceni – Nisehoana olana ny fifidianana loholona: hofaritan’ny HCC ny isan’ny seza ho an’ny Irmar sy ny MMM a été récupéré chez Newsmada.
Fivoriana ampitain-davitra : maka hevitra amin’ny HCC ny Antenimierampirenena
Tolo-kevitra famahana olana amin’ny fitsipika anatiny manokana ny amin’ny fampandehanana asa sy ny fomba fiasan’ny Antenimierampirenena mandritra vanim-potoan’ny valanaretina Covid-19 ao anatin’ny krizy fahasalamana. Izay ny nodinihina ary tapaka teny anivon’ny Antenimierampirenena, omaly, ny hahazoana manao fivoriana ampitain-davitra na “visioconférence” .Solombavambahoaka 51 amin’ny 80 ny nanaiky ny tolo-pehinkevitra, haroso eo anivon’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) hohamarinina, raha mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana na tsia. Na izany aza, fantatra fa anisan’ny angatahin’ireo solombavambahoaka ny fifanatrehana mivantana amin’ny fihaonana amin’ny mpikamban’ny governemanta hamaliana ny fanontanian’izy ireo.Mbola misy koa ny solombavambahoaka mitaraina ny amin’ny fandaniana lalàna amin’ny alalan’ny tsangan-tanana, na efa misy aza ny fomba fanaovana izany. Toy izany koa ny amin’ny fanaovana latsa-bato miafina amin’ny alalan’ny “visioconférence “.R.Nd. L’article Fivoriana ampitain-davitra : maka hevitra amin’ny HCC ny Antenimierampirenena a été récupéré chez Newsmada.
Kolontsaina: mila manao zavatra…
Hamaivanin’ny olona hatrany ny kolontsaina raha mbola mijanona amin’ny toerana misy azy ankehitriny. Mila manao zavatra ity sehatra iray ity. Mila mitondra zava-baovao, mila mizara, manaparitaka, mivelatra, miseho, manasongadina, mifanakalo, manatevina, manatsara, sns. Tsy tokony hionona amin’ny hoe « faralahin-jaza » fa manao ezaka ny ho « matoan’olona ». Porofoina eo imason’ny Malagasy fa ny fahaiza-mitana, mikajy, manolokolo, mampita, ireny kolontsaina ireny no anisan’ny mahalasa lavitra ny firenena iray.Anisan’ny mila fitandremana fatratra anefa ny fanatanterahana izany tsy hahavery fototra ny an’ny Malagasy, na sanatria, hanimba sy hiteraka kolontsaina « hafahafa »! Hatreto, tafiditra ao anatin’ny fandrosoan’ny kolontsaina ve ny fampifangaroana azy ireny? Sao sanatria, hiteraka kolontsaina mitsingevana indray ny fanaovana izany? Raha eo avokoa izany ahiahy izany, fahadisoana angaha ny mitazona sy manaja ary manome hasina ny an’ny tena mba tsy hialana amin’ireo ahiahy ireo?HaRy RazafindrakotoL’article Kolontsaina: mila manao zavatra… a été récupéré chez Newsmada.
Fitantanana rafi-panjakana: voafidy ho filohan’ny CNIDH Andriamarohasina Seth
Mpanao gazety indray. Voafidin’ireo mpikambana eo anivon’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon’olombelona (CNIDH) ho filohany Andriamarohasina Seth. Notanterahina, afakomaly teny 67 ha, izany fifidianana izany, niarahana amin’ireo avy any amin’ny faritra. Hitantana izany rafi-panjakana izany hatramin’ny taona 2025 ity mpanao gazety teo aloha ity. Efa nisahana ny andraikitry ny mpampaka-teny teo anivon’ny CNIDH izy nialoha izao andraikitra vaovao horaisiny izao. Nisolo ny toeran’ny filoha teo aloha nitantana ny CNIDH, Rabenoro Mireille, efa nodimandry, izy. Solontenan’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM) ny tenany eo anivon’ity rafitra iray ity.Hisahana ny toeran’ny filoha lefitra Andrianalivelo Prisca Nirinarisoa. Mpitsara sady mpahay lalàna ary solontenan’ny Antenimierampirenena eo anivon’ny CNIDH. Hiandraikitra ny mpampaka-teny kosa manomboka izao i Soamana Bonheur Bienvenue. Natolotry ny avy amin’ireo eo anivon’ny sembana.Synèse R. L’article Fitantanana rafi-panjakana: voafidy ho filohan’ny CNIDH Andriamarohasina Seth a été récupéré chez Newsmada.
Noho ny fahazoana milina fanasan-damba: afaka handidy marary 130 isan’andro ny HJRA
Vokatry ny fahazoan’ny HJRA milina roa vaovao fanasana sy fanamainana lamba, afaka ampitomboina 130 ny isan’ny fandidiana hataon’ny mpitsabo isan’andro raha 60 no vita teo aloha satria tsy maharaka ny fanadiovana ireo lamba kirakiraina any amin’ny toeram-pandidiana. Nohavaozina koa ny toerana fanasan-damba ho an’ny marary sy ny fitsaboana. Mitentim-bidy 299 tapitrisa mahery ny fitaovana sy ny fanatsarana nentina avy amin’ny fanjakana japoney anatin’ny fanampiana tetikasa madinika ho fiahiana ny mahaolona. Fitaovana ilaina amin’ny fampihodinana ny hopitaly ny fitaovana fanasana ireo lamba avy nampiasaina satria misoroka ny otrikaretina tsy hifindra amin’ny marary indray mandritra ny fidirana eny, hoy ny masoivoho japoney miasa eto amintsika, i Higuchi Yoshihiro, ny faran’ny herinandro teo teny Anosy. 700 ny fandriana afaka mandray marary hiatrika fandidiana ny ankamaroany, nanomboka ny taona 1986, amin’ny fandidiana 60 tanterahina, vonjy aina avokoa ny 25 amin’ireo ka mila vonona hatrany ny toeram-pandidiana sy ny fitaovana ary ny lamba ampiasaina.Vonjy A.L’article Noho ny fahazoana milina fanasan-damba: afaka handidy marary 130 isan’andro ny HJRA a été récupéré chez Newsmada.
Nécrologie du 29 juillet 2021
Cliquez pour agrandir L’article Nécrologie du 29 juillet 2021 a été récupéré chez Midi Madagasikara.